> Resource> Naghachi> iWork File Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ iWork Files
Olee Otú M Pụrụ Naghachi ehichapụ iWork File on Mac?
Ok, m nwere nsogbu banyere iWork ngwa na m Mac. M ehichapụ ihe iWork faịlụ ezighị na m synced ya iCloud ma. Ọ bụ a keynote na m mkpa iji echi. M enyocha Mkpofu kwa, ma ahụghị m ya n'ebe ahụ. M chọrọ enyemaka gị naghachi ehichapụ iWork faịlụ. Ị nwere ụfọdụ ezi ndụmọdụ?
iWork ngwa dị ka Apple ụlọ ọrụ software na Mac. Ị nwere ike mfe ịmepụta na dezie keynote, peeji nke na nọmba na iWork ngwa na gị Mac. Otú ọ dị, iWork faịlụ ka nwere ike ga-efu n'ihi OS kpatara, nhichapụ, nrụrụ aka ma ọ bụ ọbụna virus ọrịa. Nọmalị i nwere ike naghachi iWork faịlụ site na iCloud. Ọ bụrụ na iCloud bụ enweghị enyemaka, ị na-adịghị na-adị oke nchegbu kwa. E nwere ka iWork faịlụ mgbake software nke pụrụ inyere gị.
Wondershare Data Recovery for Mac Dị otú ahụ a na omume nke bụ ike naghachi iWork faịlụ furu efu ruru mberede nhichapụ, elezighị formatting nke nkebi, na ọbụna usoro njehie. Ọ naputa niile faịlụ na ụdị na iWork ngwa, gụnyere peeji nke, keynote na nọmba. Plus, nke a dị ike ngwa bụ dakọtara na iWork faịlụ mgbake na niile Mac kọmputa, gụnyere MacBook, iMac, MacBook Air, MacBook Pro, wdg
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery for Mac naghachi ehichapụ iWork faịlụ na Mac ugbu a!
3 Nzọụkwụ naghachi ehichapụ iWork Files
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite iWork faịlụ mgbake
Mgbe launching Wondershare Data Recovery for Mac, ị ga-ahụ ihe interface dị ka ndị na. Ị pụrụ ịmụta ọ bụla mgbake mode ọrụ site n'ịgụ ntuziaka na window.
Naghachi ehichapụ, formatted, furu efu ma ọ emerụ iWork faịlụ, i nwere ike iri "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi / olu ebe gị iWork faịlụ furu si
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga ịchọpụta na-egosi niile mpịakọta / partitions na gị Mac. Na ị dị nnọọ mkpa iji họrọ onye ị na-aga na-naghachi ehichapụ iWork faịlụ site na pịa "iṅomi" ịchọ ya.
Cheta na: Ị nwere ike "Kwado Deep iṅomi" naghachi iWork faịlụ site na a formatted disk.
Nzọụkwụ 3 naghachi ehichapụ iWork faịlụ na Mac
Mgbe scanning okokụre, ị nwere ike ihuchalu hụrụ iWork faịlụ elele ma gị furu efu iWork faịlụ nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nye akara iWork faịlụ ị na-aga iji weghachi na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị Mac.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị ịzọpụta natara iWork faịlụ ha mbụ na nkebi.
Olee otú Naghachi Photos si Nikon D800 Igwefoto